Indlela Phinda Lost Izithombe noma Amavidiyo kusuka Samsung Galaxy…
Q: Ingabe ikhona indlela lokulungisa iMessages zami kusulwe emuva? I ususa ingxoxo iMessage ngephutha. Ngifuna ngiphinde ngibabone.
Q: iMessages esisayinwe ngiphume akhawunti yami base ngathola umyalezo wami endala gone, Ingabe ikhona indlela angikwazi ngiphinde ngibabone?
iMessage kuyinto isevisi isithunywa osheshayo lakhiwa Apple Inc. for iOS and OS X Mountain Lion. Isebenza nge-WiFi and Network kanye akukho ngamacala yocingo. Abantu abaningi enjengayo. Kodwa ngezinye izikhathi kuzoqhubeka okungalungile, umlando ingxoxo zaziyoba asuswe futhi ungakwazi ukuthola kwabo. Ngakho singabasiza ukuba kutholakale kusulwe iMessages ingxoxo on iPhone, iPad and iPod Touch.
Uma uke wasekela idivayisi yakho
Uma kulahleka idivayisi yakho kodwa abe isipele
Uma ungazange isipele idivayisi yakho
ICLOUD noma iTunes
An Software Data yokuthola for iOS
Have ICLOUD noma iTunes Backup
Uma ivame ukusebenzisa ICLOUD noma iTunes ukulondoloza idivayisi yakho. Manje ungakwazi abuyisele iMessages emuva kalula ukusuka amafayela yokusekelayo. Alulame idatha isusiwe ICLOUD silula.
Idivayisi kulahleka bese ibe ibhekhaphu
Uma idivaysi kulahleka futhi usekelwe khona up, ICLOUD noma iTunes. Ungathola idivaysi entsha bese ukubuyisela wona kubhekhaphu eyedlule kuleli iTunes. Futhi ungakwazi nako Khipha amafayela iTunes isipele ngqo abasindise kwi PC / Mac ngenhloso software 3-party - Dr.fone.
1. Run iSofthiwe bese ukhetha "Phinda kusuka iTunes Backup ifayela" Imodi. Lolu hlelo luyoba babonisa wonke amafayela akho iTunes isipele ohlwini.
2. Khetha amafayela ubuye lolu hlelo uzoqala kukhishwe khona.
3. Buka kuqala bese ukuthola iMessages. Ungakwazi abeke emuva imessages livuke amadivaysi akho.
Ngqo scan idivayisi bese uthole imessages emuva
Uma ungazange isipele idivayisi, ungasebenzisa Dr.fone ukuskena idivayisi ngqo. Lolu hlelo uyonika umphumela emva kwesikhashana.
1. Xhuma idivayisi yakho futhi ukhethe "Phinda from iOS yedivayisi" Mode.
Inothi: Lolu hlelo luyoba ezinye nemisebenzi iTunes asebenzise. Ngakho udinga ukufaka iTunes zakamuva kuqala.
2. Landela izinyathelo. Chofoza inkinobho "Qala". Isimiso iqale ukuhlaziya idivayisi yakho futhi sibonisa Chile. Uma idivayisi yakho iPhone 3GS / 4 noma iPod Touch 4, mhlawumbe udinga ukulanda plugin ngoba.
3. Kuqala amafayela babonisa. Thola lezo wena kusulwe bese ukhethe ukuba alulame. Chofoza le ezinkulu "Phinda" inkinobho ukuqala inqubo. Amarekhodi walulama uyobasindisa kwikhompyutha. (Inguqulo yakamuva kungaba ukufaka walulama imiyalezo / imessages emuva amadivaysi akho. )
Posted on November 16, 2013 Januwari 22, 2015 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi alulame imessage, imessages alulame ukusulwa on iPad, fumana imessages ukusulwa on iPhone, fumana imessages ukusulwa on iPod touch
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuze ubukele DVD movie on iPad Mini 2
Next post Next: Top 10 Smartphone Security Tips